Download ihe onyonyo vidiyo YouTube - Na-akwado ọtụtụ weebụsaịtị
Download ihe onyonyo vidiyo YouTube
❤ Budata ihe ọkpụkpọ vidiyo niile nke vidiyo YouTube ọ bụla na ngwaọrụ a dị mfe.
Iji nweta ntaneti vidiyo nke vidiyo YouTube ọ bụla tinye URL nkịtị nke vidiyo ahụ na igbe ederede dị n'okpuru.
⚠ URL gị kwesịrị ịdị ka nke a:
Nweta YouTube thumbnail
Saịtị a na - enyere gị aka ibudata obere mkpirikpi vidiyo YouTube ọ bụla site na itinye URL vidiyo.
⚠ Mpempe akwụkwọ ibe nwere ụdị ọhụụ. Melite ugbu a.
⚠ Networksfọdụ netwọkụ mmekọrịta kwesiri ịhajigharị peeji ị na - elele ugbu a iji nweta thumbnail ziri ezi.
♳ Sava 1
♴ Sava 2
♵ Sava 3
✚ Tinye na Aro
❝Dịkwuo nlele maka vidiyo site na itinye mgbakwunye❞
☀ Thumbnail Grabber na-akwado nbudata isi okwu site na Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, DailyMotion, Vimeo, Tumblr, Imgur, Liveleak, TED, Mashable, 9gag, Break, Soundcloud, Flickr, ESPN, IMDB, Buzzfeed, Okru, Metacafe, WorldStarHipHop na ndị ọzọ. ☁
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ngwa ọrụ a mara mma?
Ngwa ngwa na n'efu anaghị ewe iwe
Ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ
Ihe okike n’oge a
Na-akwado ọtụtụ weebụsaịtị
❮ Nke gara aga
❝Echekwara ndepụta foto naanị na ngwaọrụ gị❞
♻ Kpochapụ akụkọ
Pịa bọtịnụ aro ka ịchọta ezigbo echiche.
Ọ bụrụ na-eji Mac OS X
Wepụta Youtube Akwụkwọ mmado
Nweta mkpado vidiyo YouTube niile n'otu n'otu.
Nweta thumbnail 2.0 ← Dọrọ nke a na ogwe edokọbara gị
❝Ihe odide a nwere ike wepu pansta vidiyo na weebụsaịtị ọ bụla.❞
Otu esi eji YouTube Thumbnail Image Generator
Nzọụkwụ 1 : Tinye YouTube URL
Detuo na mado YouTube YouTube URL na mpaghara enyere.
Nzọụkwụ 2 : Pịa ❝Nweta YouTube thumbnail❞
Iji lelee ma budata ihe onyonyo YouTube YouTube, pịa bọtịnụ oroma
Nzọụkwụ 3 : Nweta onyonyo vidio YouTube
Budata thumbnail onyonyo si YouTube na otutu onyonyo ogo na nha
Tugharia Tupu nbudata
Ka ị pịa bọtịnụ Nyefee mgbe ị gafesịrị vidiyo vidiyo, a na-egosipụta ntụle nke onyo ngwụcha foto niile. Can nwere ike ịlele onyonyo mkpịsị aka ukwu wee pịa bọtịnụ Budata iji chekwaa obere mkpado nke vidiyo YouTube na ngwaọrụ gị.
Họrọ otu onyonyo kachasị gị
Nweta Image vidiyo YouTube na nha dị iche iche dịka nke ịchọrọ. Mgbe ị nwere ike pịa bọtịnụ wepụ, ewepụta onyonyo mkpịsị onyonyo n'ọtụtụ nha. Nwere ike ịhọrọ otu mkpịsị mkpịsị nke ukwu n'etiti 480x360, 120x90, 320x180, 1280x720 wee budata ya.
YouTube thumbnail Image Extractor bụ ọrụ ntanetị nke ga - eme ka ị hụchalụ ma budata onyonyo mkpịsị nke si na vidiyo YouTube na HD. Nwere ike nweta onyonyo Thumbnail site na YouTube n’elu ikpo okwu kachasị amasị gị dịka ngwaọrụ Windows, Linux OS, igwe Mac, gam akporo ma ọ bụ iPhone.
N'efu na oke mmachi
Ọ bụ ọrụ ntanetị kpamkpam iji chekwaa ihe onyonyo YouTube. Naanị ịchọrọ ịbanye njikọ ma nweta Image nke YouTube Video na nkeji. Na mgbakwunye, ọrụ ahụ enwereghị nsogbu ọ bụla. Ọ bụ ngwa dabeere na ihe nchọgharị kpamkpam wee nwee ike ịnweta na nyiwe ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla.
Chọta Ajụjụ Gị na Azịza Gị Ebe a - Etu esi ebudata obere vidiyo YouTube?
+ Gini bu thumbnail?
A na-eme ntanetị nke ọma na ibe weebụ dị ka iche, mbipụta pere mpe nke foto mbụ, na akụkụ maka otu ebumnuche nke ihe onyonyo isi na ibe weebụ bụ ibelata bandwidth na oge nbudata.
Ignersfọdụ ndị na-emepụta websaịtị mepụtara mkpịsị mkpịsị mkpịsị ugodi na HTML ma ọ bụ edemede nke ndị ahịa na-eme ka ihe nchọgharị nke onye ọrụ wee mebie foto ahụ, kama iji obere oyuyo oyuyo a.
+ Enwere m ike wepu vidiyo YouTube niile na vidiyo m na nnukwu mkpebi?
Ee, ị nwere ike iwepu ma budata sọlfọ nke vidiyo YouTube gị site na iji ọrụ nbudata a.
Naanị soro usoro ndị a dị n'okpuru iji nweta foto thumbnail site na vidiyo YouTube:
Mepee websaịtị YouTube mebere thumbnail Downloader.
Gaa YouTube.com ma detuo njikọ YouTube Video gị
Tapawa ya na Tinye YouTube Video njikọ igbe.
Pịa na wepụta bọtịnụ iji jide obere mkpado nke vidiyo gị ọsọ ọsọ.
Onye nbudata ihe ntanetị vidiyo YouTube anyị ga-egosipụta ngwa ngwa mkpịsị aka YouTube niile ewepụtara site na Video gị.
Inwere ike ihuchalụ ihe oyiyi nke Thumnail dị mfe ma lelee nha ha na Pixels.
Ọ bụrụ n’inwee ibudata, mgbe ahụ ịnwekwara ike ibudata obere mkpado vidiyo YouTube site na ịpị bọtịnụ Download.
Nwee obi ụtọ na itinye vidiyo vidiyo gị.
Needkwesiri ịrụ karịa usoro dị mfe iji chekwaa ihe onyonyo vidiyo YouTube gị.
+ Kedu nha bụ thumbnail YouTube?
Ihe ntanetị vidiyo Youtube dị na àgwà anọ na ogo dịgasị iche iche: SD 640 x 480, MQ 320 x 180, HQ 480 x 360, HD 1920 x 1080.
Nwere ike ịnweta onyonyo ọ bụla nke video YouTube site na ọkọlọtọ usoro. Justchọrọ ID ID vidiyo pụrụ iche, nke enwere ike ịlele na URL vidiyo.
Mpempe akwụkwọ Image nke Thumbnail: http://img.YouTube.com/vi/video_id/FILE_NAME.jpg
You nwere ike ịkọwapụta faịlụ faịlụ dabere na ogo nke obere mkpịsị ugodi ịchọrọ. Edepụtara ụfọdụ n'ime ndị a na-ejikarị n'okpuru:
http://img.YouTube.com/vi/video_id/0.jpg – Ogo zuru
http://img.YouTube.com/vi/video_id/default.jpg – Ogo zuru
http://img.YouTube.com/vi/video_id/mqdefault.jpg – Ndi an-akpo
http://img.YouTube.com/vi/video_id/maxresdefault.jpg – Mkpebi Dị Elu
http://img.YouTube.com/vi/video_id/1.jpg – Obere
http://img.YouTube.com/vi/video_id/2.jpg – Obere
http://img.YouTube.com/vi/video_id/3.jpg – Obere
+ Gịnị bụ ebumnuche nke YouTube Thumbnail Grabber ma ọ bụ jenerato?
Ebumnuche bụ isi nke Onyebere YouTube a bụ na ịnwere ike ibudata & nweta onyonyo mkpịsị vidiyo YouTube na nha ọ bụla site na vidiyo ọ bụla. Ihe onyonyo a niile nyeere aka n’ọrụ ndị ọzọ dị ka ịde blọgụ, ịkọpụta, ma ọ bụ ịkọrọ ya ndị ọzọ.
+ Kedu ihe nhọrọ nha ọ bụla iji budata ma ọ bụ mepụta nyocha ihuenyo mbụ vidiyo?
Ihe onyonyo ntanetị nke YouTube a na-enye nhọrọ ọnụọgụ anọ dị iche iche mgbe ị na-echekwa ihuenyo mgbapu:
+ Kedu ihe YouTube thumbnail nha 2019?
Ihe onyonyo Youtube e mere maka ekwesiri ibu ka o buru ibu o kwere mee, makana a ga-ejikwa onyoonyo a ka ihe nnomi oyoyo n’eji ihe eji eme ihe. Youtube na-akwado ndumodu omenala gị: Nwee mkpebi nke 1280x720 (nke pere mpe karịa 640 pikselụ).
+ Kedu ka m ga-esi see foto site na vidiyo?
Kwụsị vidiyo ahụ ruo ebe ịchọrọ iwere eserese, jiri Mbipụta Bipụta ma ọ bụ Ntanye Ntanetị iji nweta onyinyo ahụ.
+ Kedu otu i si achọta ihe oyiyi thumbnail na YouTube?
Tapawa URL url gị n’ime igbe ozi dị elu iji nweta ogo nke thumbnails niile.
+ Kedu nha nke mkpuchi mkpuchi na YouTube?
Foto Mkpuchi YouTube / Ihe Ọwa: 2560 x 1440 pixels.
YouTube ga-atụpụta ihe ngosi ọwa gị site na iji mmebe weebụ na-anabata ọrụ. YouTube na-atụ aro ka bulite art channel na 2560 x 1440 pikselụ nwere oke faịlụ kacha nke 2MB.
+ Kedụ ka m ga - esi nweta koodu akụkụ maka thumbnail YouTube?
Enwere ihe dị mfe iji weghachite onyonyo YouTube gị maka vidiyo akọwapụtara.
Naanị gaa na URL na-eso: http://i1.ytimg.com/vi/Your-video-id/hqdefault.jpg
Ugbu a, ị ga - achọta idị vidiyo nke site na vidiyo vidiyo ma ọ bụ site na koodu agbakwunyere nke vidiyo YouTube.
Ihe Nlereanya: https://i.ytimg.com/vi/YbJOTdZBX1g/hqdefault.jpg
+ Kedu ka m ga - esi detuo ihe onyonyo site na Youtube?
Nweta idị vidiyo gị site na youtube wee pịgharịa n'ime igbe ederede dị n'elu, pịa bọtịnụ ❝Nweta YouTube thumbnail❞.
+ Gịnị bụ ezi URL video URL?
+ Etu esi eme ibudata thumbnail 1080p?
Mkpebi kacha mkpa nke vidiyo vidiyo Youtube bụ 1280x720.
1080p thumbnails adịghị.
Youkwesiri iji ngwakọta mbipụta ihuenyo nweta ihe oyiyi.
Pịa Alt + Print Screen.
Modelsfọdụ ụdị nwere ike ide igodo ebipụta nke dị mma PrtScn, Prnt Scrn, Print Scr.
Ọ bụrụ na-eji Mac OS X, Pịa Shift + ⌘ + 3
+ Ọ dị mma iji ọrụ nbudata ngọngọ YouTube a?
Nchedo bụ ihe kachasị anyị mkpa, yabụ na ịhe data nke weebụsaịtị a bụ SSL ezochiri. Site na profaịlụ netwọdu echebere a, ndị ọzọ na-echekwa data gị pụọ na ndị ọzọ. Ihe nbudata nke ihe onyonyo ihe ngosi nke na-agba ọsọ site na njikọ nzuzo ezochiri na sava YouTube.
Ngwá ọrụ bara uru
Tinye Play Button na ntanetị onyonyo
Oge na-adịghị anya
Nweta YouTube Video Screenshot Online
Were nseta ihuenyo site na ọnọdụ ọdịnala
Chekwaa ndepụta okwu Youtube
Download onye enyemaka
Nyere gị aka ibudata vidiyo na ọdịyo ngwa ngwa na weebụsaịtị ọ bụla (wepu Youtube)
Njikwa ndebanye aha na YouTube
Mgbanwe agba maka YouTube
Njikwa maka Youtube
Zoo Nkwupụta YouTube
Ọnọdụ redio maka YouTube
Ihe nhazi ụda na ihe nrịba ama maka YouTube
Kachasị Egwuregwu Ọhụrụ
Otu Youtube thumbnail siri mee ka ị nweta echiche ndị ọzọ
Na-achọ ihe ntanetị YouTube kachasị mma? Chọrọ ịchọta mmụọ nsọ iji mepụta thumbnail omenala nke gị? Are na-nri ebe!
Umbmepụta obere akpaaka abụghị naanị ụzọ dị elu iji bulie ika gị elu n'ozuzu ya, mana ọ bụkwa ụzọ iji mee ka ndị na-ekiri mee nhọrọ ịhọrọ vidiyo gị n'ime nhọrọ niile dị. Ee e, obere ihe ntinye ederede agaghị eme ka ọdịnaya gị dị mma karịa ka ọ dị na ya mere ọ dị mkpa ilekwasị anya na ịmepụta ọdịnaya dị mma - mana obere mkpirikpi ga-enyere ọdịnaya gị dị egwu aka!
Greatmepụta Ntanetị Ihe Ntugharị Na Vidiyo YouTube
Dịka e kwuru n’elu, ị chọrọ ka akara gị nke ukwu ga - edetu aha ma na - ekerekwa òkè. Onwere agwa ole na ole anyi choputara na thumbnail YouTube n'okpuru.
Ebumnuche Bụ Isi ma ọ bụ Isiokwu
Foto di omimi
Omenala Ndị Ahịa
Na mgbakwunye na omume ndị a dị n’elu, o dokwara anya na imepụta cutouts, ma ọ bụ onyonyo masked, nke isi okwu bụ ihe a ma ama maka nhọrọ maka ndị nwere oge, ego, ndị ọrụ, ma ọ bụ nka dị mkpa iji dọpụ ya.
Ihe na –eme ka mkpịsị ugodi YouTube dị mkpa
Mepụta ihe osise maka YouTube dị iche na imebe maka netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ imepụta onyonyo mgbasa ozi na web. N'ihi gịnị? N'ihi na ika gi agha gha agha ka otutu asusu ndi ozo.
Akara mkpịsị aka ahụ, ka ọ dị ugbu a, bụ mmewere nke na-adọta uche kachasị na enweghị elele ya ozugbo.
Ozi kacha mma bụ na ị nwere ike ịlaghachi na vidiyo ọ bụla nke ọbá akwụkwọ gị wee melite thumbnails n'ọdịniihu ma ọ bụrụ na thumbnails ọdịnala YouTube gị wee bụrụ nke ịchọrọ.
Brandị Mbido ndị ọzọ nwere Mpempe akwụkwọ dị mfe
Ọ bụghị ụdị ahịa niile na-apụ n'ụzọ ha iji nweta okike na ntanetị YouTube ha. N'ezie, ọtụtụ ọwa emeghị ihe ọ bụla ma ọlị - ha ahọpụtaghị obere ihe ntanetị.
Ingmepụta Ihe Ntugharị Ntugharị YouTube gị
Ihe ọzọ ị ga-echebara echiche bụ nhazi nke atụmatụ gị. N’aka ozo, will gha acho imewe ihe kariri achoro nke choro ka igbanwe ngbanwe, ederede, na agba ma obu iga n’iru ihe omuma nke ichoro onye okacha amara imeputa ihe ohuru?
Ihe ngosi NBA bu ezigbo onodu ihe omuma ndi nke tempeli dikwa mfe imeputa. Onye ọ bụla nwere ikike imewe ihe dị mfe nwere ike ịmepụta ndebiri ọhụụ na ọdịnaya emelitere.
Otu esi eme thumbnail nke YouTube gị?
Ọ bụghị nsogbu n'ezie. Ọ bụrụ na ị ma ka esi eji Photoshop eme ihe mgbe ahụ ị nwere ike ịme ntanetị ngwa ngwa maka vidiyo gị ma ọ bụ ịnwere ike iji ihe ntanetị YouTube ọ bụla na ndebiri Photoshop.
Ihe onyonyo onyonyo nke ohuru gi kwesiri idi otutu o kwere omume, nihi na a ga-ejikwa onyunyo a ka ochu oyuyo na ihe ọkpụkpọ achiri. Nwee mkpebi nke 1280x720 (nke pere mpe karịa 640 pikselụ). Na-ebugote n ’ụdị onyonyo dịka JPG, GIF, BMP, ma ọ bụ PNG.
Zọ 10 iji nwetakwuo ihe na Youtube
Soro usoro 10 ma ọ bụ karịa dị mfe iji nyere aka n'usoro vidiyo YouTube gị iji nweta echiche na dollar ọzọ site na ha.
⓵ Etupụla oge gị iji bulite vidiyo na enweghị ọdịnaya metụtara ọwa Youtube ị nwere.
⓶ Kpọgharia aha vidiyo gị na aha gị wee bulite ya na YouTube. Dee nkọwa siri ike nke okwu 300 maka vidiyo gị ma pịgharịa aha gị n'usoro nkọwa.
⓷ Tapawa aha vidiyo gị dị ka ọ dị na mkpado. Jiri aha ọwa gị oge niile. Ọ na-enyere aka igosi vidiyo ọwa gị na aro atụfula ịgbakwunye mkpado vidiyo dị mkpa mana ị ga-eji ha na nkọwapụta tupu iji ha dị ka mkpado. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-atụle dị ka spamming.
⓸ Tinye njikọ mkpirisi vidiyo gị na ibe mgbasa ozi mgbasa ozi na nkọwa. Kekọrịta vidiyo na Twitter ma ọ bụ Instagram nwere hashtag ma gbakwunye otu nke mkpado na-agbanwe agbanwe.
⓹ Chọta vidiyo metụtara na niche gị site na iji mkpado Twitter na-agbanwe agbanwe ma bulite ha na ọwa gị ma soro otu mkpado na-eme otu ihe. Site n'ime nke a, enwere ohere karịa na vidiyo gị na-aga viral ma ọ bụrụ na a na-enwe nje, ị ga-enwerịrị ike iritekwu uru site na ị bulite vidiyo YouTube. Kwekọrịta na Blogger, Reddit, Tumblr, Pinterest, Google Plus na Facebook na mkpado.
⓺ Chọta vidiyo na-agbanwe agbanwe site na Nhazi Google nke metụtara niche gị ma dị mfe mee vidiyo na ya ma bulite ya na ọwa gị. Wayzọ a ị na-emekwu ohere ka vidiyo gị wee nweta mmekọrịta ọha na eze.
⓻ Ọ bụrụ na ịmara gbasara ire ahịa na-ejikọ ahịa mgbe ahụ ọ ga - enyere gị aka inweta ọtụtụ dọla na ọwa gị. Họrọ ezigbo ngwaahịa metụtara niche gị ma mee vidiyo na-ejide ya na bulite ya. Mgbe itesịrị bulite njikọ njikọta gị na nkọwa mbụ nke nkọwa nke mere na ọ bụrụ na mmadụ emee ọnọdụ ya ka ọ zụta ngwaahịa gị, ya / ya nwere ike iso njikọ gị ịzụta ya. Ya mere njikọta bu ezigbo ụzọ iji kpata ego.
⓼ Gbado anya na njiri mara abụghị ọnụọgụ ma jiri akara cpc High. Soro ndụmọdụ ndị a dị mfe iji bulie echiche ọwa gị nke ga - enyere gị aka iritekwu uru na YouTube.
⓽ Countries ga-eche mba kacha mma ịnwe ọnụego cpc ma chọta okwu cpc dị elu.
⓾ Emere ihe onyonyo Youtube Youtube ọhụụ maka vidiyo gị ka ndị mmadụ wee nwee mmasị na ya. Y’oburu na imaghi otu esi eme thumbnail abuo ndi YouTube mgbe ahu i puru idetu ya na vidiyo ndi ahu bu ihe uto ma nwekoro na vidiyo gi Ihe ntanetị mara mma na-adọrọ mmasị ndị mmadụ mgbe niile ma na-amanye ha ka ha kirie vidiyo ahụ. N’ihi ya, buru n’obi.
Chekwaa ihe onyonyo onyonyo vidio na vimeo nke ogo niile n’efu. Ngwa a ga - eme ka ị budata obere isi ala nke ogo niile. Naanị kpatụ URL nke video thumbnail na ndenye dị n'okpuru wee pịa Nweta Foto Ntọala.
Best YouTube Thumbnail Grabber - Zọpụta Youtube Video Thumbnails
Nbudata ihe onyonyo a na-egosi youtube na vidiyo na Full HD (1080), HD (720), SD, na kwa obere. ọ na-akwado usoro ugbu a: YouTube (HD, HQ, 1080p, 4K)
Nwebisiinka © 2019
Gosi nkwado gị ma kekọrịta weebụsaịtị a:
Ejiri m ọrụ nbudata ihe ntanetị a mepụta ntanetị ihuenyo maka ọrụ m na-abịa. Oge nchekwa dị otú a, nwere ike zọpụta m oge niile n'ogologo ma na-arụ ọrụ zuru oke.
Ihe TOS amụma nzuzo Kpọtụrụ anyị Sitemap Facebook